MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA EEYAHA BEAGLE - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Eeyaha Beagle
Baylee the Beagle at 8 bilood jir— Waxaan qaadanay Baylee markii ay jirtay 3 bilood. Waxay ahayd wax lagu farxo inay agjoogto ilaa maalintii koowaad. Waxay ku oydaa oo ku garaacdaa kitty-yada aysan fahmin inay rabto inay ciyaarto uun! Waxay jeceshahay raacista gawaarida, la kulanka dadka cusub iyo la ciyaarista eeyaha kale. '
The Beagle waa eey adag oo adag oo adag oo u muuqda gabal yar Foxhound . Jidhku waa dhisme ahaan-u-dhismay halka qalfoofku aad u dhaadheer yahay oo waxyar buu liitaa. Xuubka laba jibaaran waa mid toosan oo dherer dhexdhexaad ah. Indhaha waawayn waa bunni ama nirig si fiicanna waa loo kala soocay. Dhagaha ballaaran, dhegaha waa kuwo hooseeya oo dhaadheer. Sanka madow waa mid ballaaran oo leh dulal diiran oo buuxa. Cagaha ayaa wareegsan oo adag. Dabada ayaa loo dhigay si dhexdhexaad ah oo aan waligeed dhabarka ka rogin. Koodhku waa dherer dhexdhexaad ah, dhow, adag, jilicsan oo sahlan in la daryeelo. Nooc kasta oo midab-midab leh waa mid la aqbali karo oo ay ku jiraan liin, midabbo, madow iyo cagaar, casaan iyo caddaan, oranji iyo caddaan ama liin iyo caddaan, saxan buluug ah iyo saxan cas. Bahalku waxay leeyihiin cabaad / baydh jilif ah oo gooni ah markay ugaarsiga ku jiraan.
Gorgorku waa mid jecel, macaan oo jilicsan, kuna faraxsan inuu arko qof walba, kuna salaamo dabada ruxruxda. Waa mid bulsheed, geesinimo iyo caqli badan. Beagle-ku waa ku fiican yahay carruurta guud ahaanna wuu ku fiican yahay eeyaha kale, laakiin dareenkiisa ugaarsiga dartiis, looma aamini karo xayawaannada aan xayawaanka ahayn, ilaa ay la wadaagaan bisadaha iyo xayawaannada kale ee guryaha deggan markay yar yihiin. Gorgorku waxay leeyihiin maskax iyaga u gaar ah. Waxay yihiin kuwo go'an oo feejigan una baahan bukaanka, tababarka adag. Waa muhiim inaad tahay hogaamiyaha xirmada eeygan oo aad siiso qadarka saxda ah ee jimicsiga maskaxda iyo jirka, oo ay ku jiraan maalin kasta xirmo socod , si looga fogaado kala tagga walaac . Jimicsi kugu filan way deganaan doonaan. Waxa kale oo aad iibsan kartaa urta xayawaanka oo aad ku ciyaari kartaa ciyaaro raadraac leh Beagle-kaaga si aad uga caawiso qancinta dareenkeeda si aad ula socoto. Beagle ma laha jilif dhawaaqa oo caadi ah, laakiin halkii uu ka yeeri lahaa qaylo dheer oo dhawaaqeedu u eg yahay dhawaq gaaban. Gorgorku waa mid xiise leh oo u janjeedha inay raacaan sankooda. Hadday ur soo qaadaan way iska wareegi karaan oo xitaa ma maqli doonaan inaad dib ugu yeerto, ama ay daryeesho inay dhagaystaan, maadaama ay aad ugu mashquulsan yihiin isku dayga ay ku doonayaan inay ku helaan meesha kale ee kale. Ka taxaddar marka aad u fasaxayso xadhigga inaad ku jirto aag aamin ah. Gorgorlada loo oggol yahay inay noqdaan hoggaamiyeyaasha xirmada bini'aadamka waxay ku horumarin karaan heerar kala duwan arrimaha dhaqanka , oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, ilaalin , ciyey waswaas, qabsashada, qaniinyada iyo dabeecadaha wax dumiya marka kali laga tago . Kuwani ma aha astaamo Beagle, laakiin waa dabeecado ay keeneen hoggaan la'aan iyo / ama jimicsi ka timaadda bina-aadamkooda. Dabeecadaha waa la sixi karaa marka dareenka eygu kulmo.
Dhererka: Ragga 14 - 16 inji (36 - 41cm) Dumarka 13 - 15 inji (33 - 38cm)
intee le'eg ayay miisaanka digaagga 'digaaga'
Waxaa jira laba fasal oo dherer ah, 13 - 15 inji (33 - 38 cm) iyo ka yar 13 inji (33 cm).
Miisaanka: Ragga 22 - 25 rodol (10 - 11 kg) Dumarka 20 - 23 rodol (9 - 10 kg)
Khadadka qaarkood waxay u nugul yihiin suuxdin, wadne xanuun, indhaha iyo dhibaatooyinka dhabarka. Sidoo kale u nugul chondroplasia aka dwarfism (lugaha hore ee qallooca, sida Basset's). Eeg tusaale ka mid ah chondroplasia eey . U janjeera burooyinka unugyada .
Gorgorku kuma fiicna guriga haddii ay helaan fursado badan oo dibedda ah. Waxay ku firfircoon yihiin gudaha iyo deyr yar ayaa ku filnaan doona.
Firfircoonida iyo lahaanshaha awood weyn, Beagle wuxuu u baahan yahay jimicsi fara badan, oo ay ku jiraan dhaqso socod maalinle ah . Waa inay lahaato daarad deyr leh oo cabir macquul ah ku soo jiidan karta. Marwalba isticmaal leedh markii aad ku soconaysid noocyadan ama waxaad halis ugu jirtaa inay baaba'do adigoo raadinaya ugaadha duurjoogta ah.
2 - 14 eeyo yaryar, isku celcelis 7
Jaakada jilicsan ee jilicsan ee Beagle way fududahay in la ilaaliyo. Ku caday burush adag, oo ku maydh saabuun fudud markii loo baahdo oo keliya. Shaambo qalalan mararka qaarkood. Hubso inaad si taxaddar leh u fiiriso dhegaha calaamadaha infekshinka oo ciddiyaha ha la jaro. Noocani waa celcelis daadiya.
Beagles-kii ugu horreeyay wuxuu dib ugu soo laabtay 1500s. Ugaadhsadayaasha Ingiriisiga ah ayaa baakadaha eygan ka soo qaadan lahaa dusha sare ugaadhsiga bakayle raadinta , bakayle, cows, digaagduur iyo xayawaanno kale oo yaryar. Noocani waxaa laga yaabaa inuu asal ahaan ka soo jeedo iskutallaabta u dhexeysa Harrier iyo noocyada kale ee ugaarsiga Ingiriiska. Eeyadu waxay tan iyo markaas noqdeen mid ka mid ah noocyada ugu caansan Mareykanka. Noocani wuxuu keligiis ugaarsan karaa, laba-labo ama baakado. Magaca 'Beagle' waxaa laga yaabaa inuu ka yimid erayga Faransiiska 'be'geule' oo macnaheedu yahay 'hunguriga gape,' oo loola jeedo eeyaha codka siinaya. Magaca ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu ka yimid cabirka eeyga, asal ahaan wuxuu ka yimid ereyga Faransiiska ah 'beigh,' eraygii hore ee Ingiriisiga 'begele,' ama laga yaabee erayga Celtic 'beag', oo dhammaantood macnaheedu yahay 'yar'. Wuxuu sidoo kale u adeegay sidii eey aad u fiican oo ogaada mukhaadaraadka wuxuuna sameeyaa wehel wanaagsan. Waxaa markii ugu horreysay aqoonsaday xisbiga AKC sanadkii 1885.
dhibco casaan leh eeyaha sanka
Hooska ubax yar oo madow iyo tan madow ah (Lucy oo kor lagu muujiyay waa hooyadiis)
Hooska cunugga madow iyo tan ee Beagle ee cunugga leh ee leh qashin-qubka saddex-geesoodka ah hooyadu waa madow iyo buluug (Lucy, kor ayaa ka muuqata) aabuhuna waa Beagle saddex-geesle ah.
Poncho labka Beagle ee 2 sano jir ah— 'Poncho waa eey la badbaadiyay, waxaa laga helay daadadka North Carolina, Oct. 2016. Koox samatabixin ah oo ka socota Pennsylvania ayaa tagay halkaas waxayna keeneen eeyo badan PA si ay guryo u helaan. Waxaan korsaday Jan. 2017. Waa macaan oo madax adag. Wuxuu jecel yahay inuu tago beerta eeyga oo uu la halgamo saaxiibbadiis. Waa halgamaa xirfad leh !! Aad baa loo jecel yahay waana ku faraxsanahay inaan helnay! '
Hobbs eeyga weyn eey Beagle markuu jiro 4 sano
Gorgor Dad Weyn
Ku mashquulsan labka Beagle markay jiraan 2 sano
Kris Beagle madow iyo caddaan ah 1 sano jir
'Leo liin dhanaanta ah ee Beagle-Indhihiisu waa dhalaal, wayna ka fudud yihiin sawirka, waxaay u dhowdahay midab liin ah, ciddiyahiisuna waa cadaan adag.'
3 bilood jir Jarmal sawiro eey ah
Emma liinta iyo bahalka cad ee '3 1/2' sano jir
'Kani waa Keagan, casaankayga iyo caddaankayga Beagle isagoo samir ku sugaya albaabka si aan u aado a socod . Keagan qiyaastii hal sano iyo bar ayuu ku jiraa sawirkan. Waxay jeceshahay inay ku ciyaarto dhalooyinka oo ay ku calaliso xashiishka! Iyadu waa dad eey ah oo jecel oo jecel inay salaaxaan. Iyadu waa jilicsan tahay oo way baxaysaa! Waxay rabtaa inay ku tiraahdo hi qof kasta oo ay aragto.
Lucy the black and tan Beagle ayaa dhowr sano ka weyn sawirkan waxayna biloowday cawl. Lucy wax yar oo cad oo dhabankeeda ah ayay leedahay cagteeda inta hartayna inteeda kale waa madow oo midabkeedu yahay.
Eeg tusaalooyin dheeraad ah oo ku saabsan gorgorka
Sawirada Beagle 1
Sawirada Beagle 2
Sawirada Beagle 3
Sawirada Beagle 4
Sawirada Beagle 5
Sawirada Beagle 6
Sawirada Beagle 7
Sawirada Beagle 8
Sawirada Beagle 9
Eeyaha Gorgor: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
5 bilood jir bulldog american
badh pug badh boston terrier
dib u helida dahabiga ah ee wax yar sii jooga
shih tzu cocker spaniel eeyo
Jack Russell muqisho Pit isku qasan